Saturday January 08, 2022 - 11:30:14
Madaxda ugu sarraysa dowladda Federaalka ayaa markale soo saaray awaamir isbarbar yaac ah arrinkaas oo sare usii qaadaya khilaafkii labada dhinac udhaxeeyay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray ku amray guddoomiyaha Bankiga dhexe in uusan bixin karin lacag dhan 9 Milyan oo dollar oo ay leedahay dowladda Imaaraatka Carabta.
Farmaajo ayaa qoraalkiisa ku sheegay in lacagta malaayiinta dollar ah oo garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu qabtay sanaddii 2018 ay halis ku tahay amniga dalka sidaas daraadeed ay muhiim tahay in aan labixin.
R/wasaare Rooble ayaa shalay amar ku bixiyay in dowladda Imaaraatka Carabta dib loogu celiyo lacag ku dhow 10 malyan oo dollar isagoo madaxda xukuumadda Abu Dubai uga cudur daartay khalad laga galay.
Lacagta Imaaraatka ayaa markale sii shidaysa hardanyihii siyaasadeed ee ka dhax jiray madaxda ugu sarraysa DF-ka, dowladaha khaliijka carabta ayaa kala wata siyaasiyiinta dabadhilifyada ah ee Soomaaliya ka jira.